Chebara Ụdị Mmadụ I Kwesịrị Ịbụ Echiche | Nke A Na-amụ Amụ
E Doro Unu Nsọ
AKỤKỌ NDỤ Jehova ‘Na-eburu M Ibu M Kwa Ụbọchị’
‘Ewesola Jehova Oké Iwe’
Ndị Nne na Nna, Malitenụ Mgbe Nwa Unu Bụ Nwa Ọhụrụ Kụziwere Ya Okwu Chineke
Ka Anyị Na-echebara Ibe Anyị Echiche, Na-agbarịtakwa Ibe Anyị Ume
Chebara Ụdị Mmadụ I Kwesịrị Ịbụ Echiche
Ị̀ Na-ahụ Ụgbọ Ịnyịnya Na-acha Ọkụ Ọkụ Ịlaịsha Hụrụ?
FROM OUR ARCHIVES Obi Tọrọ Eze Ezigbo Ụtọ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Ọgọst 2013
“Chebaranụ ụdị mmadụ unu kwesịrị ịbụ echiche n’ihe banyere àgwà dị nsọ na omume ịsọpụrụ Chineke.”—2 PITA 3:11.
‘Olee ụdị mmadụ anyị kwesịrị ịbụ’ ka anyị na Chineke nwee ike ịdị ná mma?
Olee otú Setan si na-eduhie ndị mmadụ?
Ị chọọ ka gị na Jehova na-adị ná mma, gịnị ka i kwesịrị ịna-eme?
1, 2. ‘Olee ụdị mmadụ anyị kwesịrị ịbụ’ ka anyị na Chineke nwee ike ịdị ná mma?
ANYỊ na-achọkarị ịma ihe ndị ọzọ chere banyere anyị. Ma, ebe anyị bụ Ndị Kraịst, ihe na-aka anyị mkpa bụ ihe Jehova chere banyere anyị. Ọ bụ Jehova kacha ukwuu ma n’eluigwe ma n’ụwa. Ọ bụkwa ya bụ “isi iyi nke ndụ.”—Ọma 36:9.
2 Pita onyeozi kwuru na ọ bụrụ na anyị chọrọ ka anyị na Jehova dịrị ná mma, anyị kwesịrị ịna-akpa ‘àgwà dị nsọ, na-emekwa omume ịsọpụrụ Chineke.’ (Gụọ 2 Pita 3:11.) “Àgwà” anyị ga-adị nsọ ma ọ bụrụ na anyị ana-ebi ndụ dị ọcha mgbe niile. Ihe ọ pụtara bụ na anyị kwesịrị ịna-eche ihe ndị dị mma, na-akpa àgwà ọma ma na-efe Chineke otú ọ chọrọ ka e si na-efe ya. Ihe ọzọ bụ na ọ bụrụ na anyị ejiri obi anyị niile hụ Chineke n’anya ma na-akwanyere ya ùgwù, ọ ga-enyere anyị aka ịna-eme “omume ịsọpụrụ Chineke.” Anyị chọọ ka anyị na Chineke dịrị ná mma, anyị kwesịrị ichebara ma otú anyị si akpa àgwà ma ụdị obi anyị ji efe ya echiche. Ebe ọ bụ na Jehova “na-enyocha obi,” ọ ma ma ànyị na-akpa àgwà ọma, marakwa ma ànyị na-efe naanị ya.—1 Ihe 29:17.
3. Olee ajụjụ anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka anyị na Chineke na-adị ná mma?
3 Setan bụ́ Ekwensu achọghị ka anyị na Chineke dịrị ná mma. Nke bụ́ eziokwu bụ na ọ na-agbasi mgba ike ka o mezuo ihe a o bu n’obi. Setan na-achọkarị iji ụgha na aghụghọ eduhie anyị ka anyị kwụsị ife Chineke. (Jọn 8:44; 2 Kọr. 11:13-15) N’ihi ya, anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị, sị: ‘Olee otú Setan si eduhie ndị mmadụ? Gịnị ka m ga-eme ka mụ na Jehova nwee ike ịna-adị ná mma?’
OLEE OTÚ SETAN SI EDUHIE NDỊ MMADỤ?
4. Olee ihe Setan na-edè iji mee ka anyị na Chineke ghara ịna-adị ná mma? Olee ihe mere o ji na-edè ya?
4 Onye na-eso ụzọ Jizọs aha ya bụ Jems dere, sị: “A na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ nke aka ya rapụtara ya wee rafuo ya. Mgbe ọchịchọ ahụ tụụrụ ime, ọ na-amụpụta mmehie; mgbe e mechara mmehie, ọ na-amụpụta ọnwụ.” (Jems 1:14, 15) Setan na-edè obi anyị n’ihi na ọ ma na ihe ọ bụla anyị na-eme na-esi n’obi anyị. Ọ makwa na ya nweta obi anyị, o nwere ike ime ka anyị na Chineke ghara ịdị ná mma.
5, 6. (a) Olee otú Setan si na-edè obi anyị? (b) Olee ihe atọ Setan ji na-eme ka ndị mmadụ na-eche ihe ọjọọ? Gịnị mere o ji adịrị ya mfe iji ha anwata ndị mmadụ?
5 Olee ihe Setan ji na-edè obi anyị? Baịbụl kwuru, sị: “Ụwa dum dị n’aka ajọ onye ahụ.” (1 Jọn 5:19) Otu n’ime ihe ndị Setan ji na-edè obi anyị bụ “ihe ndị dị n’ụwa.” (Gụọ 1 Jọn 2:15, 16.) Kemgbe ọtụtụ puku afọ, Ekwensu na-eji ihe ndị dị n’ụwa eduhie ụmụ mmadụ. Ọ na-eji aghụghọ eme ya. Ebe ọ bụ na anyị bi n’ụwa a, anyị kwesịrị ịmụrụ anya ka ọ ghara iji ụzọ aghụghọ ya nweta anyị.—Jọn 17:15.
6 Setan chọrọ ime ka anyị na-eche ihe ọjọọ. Jọn onyeozi kwuru ihe atọ Setan na-eji eme ka ndị mmadụ na-eche ihe ọjọọ. Nke mbụ bụ “ọchịchọ nke anụ ahụ́,” nke abụọ abụrụ “ọchịchọ nke anya,” ebe nke atọ bụ “oké ngosi nke ihe mmadụ ji ebi ndụ.” Setan ji ihe atọ a nwaa Jizọs ọnwụnwa n’ala ịkpa. Ebe ọ bụ na o teela Setan siwere ụdị ọnyà ndị a, ọ ghọọla aka ochie na ha. Ọ makwa nke ọ ga-eji nweta onye ọ bụla ọ chọrọ inweta. Tupu anyị atụlee ihe anyị ga-eme ka Ekwensu ghara inweta anyị, ka anyị tụlee otú Ekwensu si nwata Iv ma ọ nwataghị Ọkpara Chineke.
“ỌCHỊCHỌ NKE ANỤ AHỤ́”
Ọ bụ “ọchịchọ nke anụ ahụ́” ka Setan ji duhie Iv (A ga-akọwa ya na paragraf nke 7)
7. Olee otú Setan si jiri “ọchịchọ nke anụ ahụ́” nwaa Iv ọnwụnwa?
7 Anyị niile na-eri nri ka anyị nwee ike ịna-adị ndụ. Chineke kere ala ka ọ na-emepụta nri hiri nne. Setan nwere ike iji nri mee ka anyị kwụsị ime uche Chineke. Ka anyị tụlee otú o si jiri ya nweta Iv. (Gụọ Jenesis 3:1-6.) Setan gwara Iv na ọ gaghị anwụ ma o rie mkpụrụ si ‘n’osisi ịma ihe ọma na ihe ọjọọ.’ Ọ gwara ya na ọ ga-adị ka Chineke ma ọ bụrụ na o rie ya. (Jen. 2:9) Ihe Ekwensu bu n’obi bụ na ọ bụghị iwu na ọ ga-erubere Chineke isi ka o nwee ike ịdị ndụ. Ihe a o kwuru bụ ụgha kpụ ọkụ n’ọnụ. Mgbe Setan kwuchara ihe a, o nwere ihe abụọ Iv nwere ike ime ma ọ chọọ. Nke mbụ bụ na o nwere ike ikpebi na ya agaghị eri mkpụrụ osisi ahụ. Nke abụọ abụrụ na o nwere ike ịna-eche banyere mkpụrụ osisi ahụ ma chọwa otú ọ ga-esi aghọrọ ya. Iv ma na e nwere osisi ndị ọzọ o nwere ike ịghọrọ mkpụrụ ha rie n’ogige ahụ. Ma, o kpebiri ichebara ihe Setan gwara ya banyere osisi ahụ dị n’etiti ogige ahụ echiche ma “ghọrọ mkpụrụ ya rie.” Setan bu ụzọ mee ka Iv chọwa ime ihe Chineke gwara ya emela.
Jizọs ekweghị ka ihe ọ bụla megharịa ya anya (A ga-akọwa ya na paragraf nke 8)
8. Olee otú Setan si jiri ‘ọchịchọ anụ ahụ́’ nwaa Jizọs ọnwụnwa? Gịnị mere na Setan anwataghị Jizọs?
8 Setan jikwa ọchịchọ anụ ahụ́ nwaa Jizọs ọnwụnwa n’ala ịkpa. Mgbe Jizọs buchara ọnụ ụbọchị iri anọ, ehihie na abalị, Setan ji nri nwaa ya ọnwụnwa. Setan sịrị ya: “Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, gwa nkume a ka ọ ghọọ ogbe achịcha.” (Luk 4:1-3) O nwere ihe abụọ Jizọs nwere ike ime ma ọ chọọ. Nke mbụ bụ na o nwere ike ikpebi na ya agaghị eji ike ya rụọ ọrụ ebube nweta ihe ọ ga-eri. Nke abụọ abụrụ na o nwere ike ikpebi na ya ga-eji ike ya eme otú ahụ. Jizọs ma na ya ekwesịghị iji ike ya mee ihe ga-abara naanị onwe ya uru. N’agbanyeghị na agụụ ji ya, ihe ka ya mkpa abụghị nri, kama ọ bụ ime ihe ga-eme ka ya na Jehova dịrị ná mma. N’ihi ya, ọ zara Setan, sị: “E dere, sị, ‘Ọ bụghị naanị achịcha ga-eme ka mmadụ dị ndụ, kama ọ bụ okwu niile nke na-esi n’ọnụ Jehova pụta.’”—Mat. 4:4.
“ỌCHỊCHỌ NKE ANYA”
9. Gịnị ka okwu bụ́ “ọchịchọ nke anya” na-egosi? Olee otú Setan si jiri ya nwaa Iv ọnwụnwa?
9 Jọn kwukwara na Setan na-eji “ọchịchọ nke anya” anwa ndị mmadụ ọnwụnwa. Okwu bụ́ “ọchịchọ nke anya” gosiri na naanị anya mmadụ lere ihe nwere ike ime ka ọ chọwa otú ọ ga-esi enweta ya. Setan ji ya nweta Iv. Ọ gwara Iv, sị: “Anya unu ga-emeghe.” Ka Iv na-ele mkpụrụ osisi ahụ anya ka ọ na-adọkwu ya akpịrị. Ọ chọpụtakwara na mkpụrụ osisi ahụ “na-agụsi anya agụụ ike.”
10. Olee otú Setan si jiri “ọchịchọ nke anya” nwaa Jizọs ọnwụnwa? Gịnị ka Jizọs zara ya?
10 Olee otú Setan si jiri “ọchịchọ nke anya” nwaa Jizọs ọnwụnwa? Setan gosiri Jizọs “alaeze niile nke elu ụwa mmadụ bi n’otu ntabi anya; Ekwensu wee sị ya: ‘M ga-enye gị ikike a niile na ebube ha, n’ihi na e nyefewo ha n’aka m, ọ bụkwa onye ọ bụla m chọrọ ka m na-enye ya.’” (Luk 4:5, 6) Jizọs ejighị anya nkịtị hụ alaeze niile nke ụwa, kama ọ hụrụ ebube ha n’ọhụụ. Ọ ga-abụ na Setan chere na ihe Jizọs hụrụ ga-adọ ya akpịrị. Ihere emeghịdị ya, ya asị Jizọs: “Ọ bụrụ na i fee m ofufe, ha niile ga-abụ nke gị.” (Luk 4:7) Jizọs achọghị ịbụ ụdị onye Setan chọrọ ka ọ bụrụ. Ọ zara Setan ozugbo ahụ, sị: “E dere, sị, ‘Ọ bụ Jehova Chineke gị ka ị na-aghaghị ife ofufe, ọ bụkwa naanị ya ka ị na-aghaghị ijere ozi dị nsọ.’”—Luk 4:8.
“OKÉ NGOSI NKE IHE MMADỤ JI EBI NDỤ”
11. Olee otú Setan si duhie Iv?
11 “Oké ngosi nke ihe mmadụ ji ebi ndụ” bụ ihe nke atọ Jọn kwuru banyere ya. Mgbe ahụ naanị Adam na Iv nọ n’ụwa, e nweghị onye ha ga-eji ‘ihe ha ji ebi ndụ’ akpara nganga. Ma, ha gosiri na ha dị mpako. Mgbe Setan na-anwa Iv ọnwụnwa, o mere ka Iv chewe na o nwere ezigbo ihe Chineke na-achọghị ka o nweta. Ekwensu gwara ya na ụbọchị ọ ga-eri “mkpụrụ si n’osisi ịma ihe ọma na ihe ọjọọ,” ọ ‘ga-adị ka Chineke, mara ihe ọma na ihe ọjọọ.’ (Jen. 2:17; 3:5) Setan chọrọ ka Iv na-eche na ihe ga-agaziri ya ma ọ gbakụta Jehova azụ. O nwere ike ịbụ na ọ bụ mpako mere ka Iv kweta ụgha a Setan ghaara ya. O riri mkpụrụ osisi ahụ Chineke sị ha erila ma chee na ya agaghị anwụ. Iv dara ya!
12. Olee ụzọ ọzọ Setan si nwaa Jizọs? Gịnị ka Jizọs gwara ya?
12 Otú Jizọs si dị umeala n’obi enweghị atụ. Ọ dịghị mpako ka Iv. Setan nwara ya ka o mee ihe ga-eme ka ndị mmadụ too ya, nakwa ihe ga-eme ka o lee Chineke ule. A sị na Jizọs mere ihe ahụ, ọ gaara egosi na ọ dị mpako. Kama ime otú ahụ, ọ gwara Setan hoo haa, sị: “E kwuru, sị, ‘Elela Jehova bụ́ Chineke gị ule.’”—Gụọ Luk 4:9-12.
GỊNỊ KA ANYỊ GA-EME KA ANYỊ NA CHINEKE NWEE IKE ỊNA-ADỊ NÁ MMA?
13, 14. Olee ihe ụfọdụ Setan ji arata ndị mmadụ taa?
13 Setan na-esikwa otú ahụ o si nwaa Iv na Jizọs anwa anyị taa. Ọ na-eji “ọchịchọ nke anụ ahụ́” anwa ndị mmadụ ka ha na-eme omume rụrụ arụ, na-eri oké nri, na-aṅụkwa oké mmanya. Ọ na-eji “ọchịchọ nke anya” anwa ndị mmadụ ka ha na-ele ndị gba ọtọ, nke ka nke, n’Ịntanet. Ihe ọzọ Setan ji na-anwa ndị mmadụ bụ “oké ngosi nke ihe mmadụ ji ebi ndụ.” Ọ na-eji ya eme ka ndị mmadụ dị mpako, na-achọ ọkwá, na-achọ ka a na-anụ aha ha, na-achụkwa ego ọnwụ ọnwụ.
Olee ihe Baịbụl kwuru i kwesịrị icheta ma e jiri nke ọ bụla n’ime ihe ndị a nwaa gị? (A ga-akọwa ya na paragraf nke 13 na 14)
14 Setan na-eji “ihe ndị dị n’ụwa” arata mmadụ otú ahụ onye na-akụ azụ̀ si arata azụ̀. Onye na-akụ azụ̀ na-etinye ihe azụ̀ na-eri na nkò. Azụ̀ bịazie ịtụrụ ya, nkò ahụ ejide ya. Ọ bụ otú ahụ ka Setan na-eme. Ọ na-eji ihe ndị anyị nwere ike iche na ha dị mkpa eme ka anyị chọọ inupụrụ Chineke isi. Ụdị ọnwụnwa ahụ bụ ụzọ aghụghọ ọ chọrọ isi merụọ obi anyị ka ime ihe ọjọọ gụwa anyị agụụ. Ọ chọrọ ka anyị chee na igbo mkpa anyị na ikpori ndụ dị mkpa karịa ime uche Chineke. Ị̀ ga-ekwe ka Setan ghọgbuo gị?
15. Gịnị ka anyị ga-eme ka Setan ghara ịghọgbu anyị otú ahụ Jizọs na-ekweghị ka ọ ghọgbuo ya?
15 Setan ghọgburu Iv, ma Jizọs ekweghị ka ọ ghọgbuo ya. Setan nwara Jizọs ugboro atọ. Na nke ọ bụla, Jizọs gwara ya ihe e dere n’Akwụkwọ Nsọ. Jizọs sịrị ya: “E dere, sị” ma ọ bụ, “E kwuru, sị.” Ọ bụrụ na anyị na-amụsi Akwụkwọ Nsọ ike, anyị ga-ama Baịbụl nke ọma. Anyị ga-enwekwa ike icheta amaokwu Baịbụl ndị ga-enyere anyị aka ime ihe ziri ezi ma ọnwụnwa bịara anyị. (Ọma 1:1, 2) Akwụkwọ Nsọ kwuru gbasara ndị ji obi ha niile fee Chineke n’oge ochie. Ọ bụrụ na anyị ana-echeta ha, ọ ga-emekwa ka anyị jiri obi anyị niile na-efe Chineke. (Rom 15:4) Setan agaghị enweta anyị ma ọ bụrụ na anyị na-asọpụrụ Jehova, ya bụ, ọ bụrụ na anyị hụrụ ihe ọ hụrụ n’anya n’anya ma kpọọ ihe ọ kpọrọ asị asị.—Ọma 97:10.
16, 17. Olee otú “ike iche echiche” anyị nwere ike isi mee ka anyị kpawa àgwà ọma ma ọ bụ àgwà ọjọọ?
16 Pọl onyeozi gwara anyị ka anyị jiri “ike iche echiche” anyị na-ejere Chineke ozi ka anyị nwee ike ịna-eche echiche otú Jehova si eche, ọ bụghị otú ụwa si eche. (Rom 12:1, 2) Pọl chetaara anyị na anyị kwesịrị ịkpachara anya n’ihe ndị anyị na-eche. Ọ sịrị: “Anyị na-akụghasị echiche na-ezighị ezi na ihe ọ bụla dị elu nke na-emegide ihe ọmụma Chineke; anyị na-emerikwa echiche ọ bụla iji mee ka ọ na-erubere Kraịst isi.” (2 Kọr. 10:5) Ihe anyị na-eche n’obi anyị nwere ike ime ka anyị kpawa àgwà ọma ma ọ bụ àgwà ọjọọ. N’ihi ya, anyị kwesịrị ‘ịna-eche’ gbasara ihe ndị ga-eme Chineke obi ụtọ.—Fil. 4:8.
17 Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịdị nsọ n’anya Chineke, anyị ekwesịghị ịna-eche ihe ndị na-adịghị mma. Anyị kwesịrị ịhụ Jehova n’anya “n’obi dị ọcha.” (1 Tim. 1:5) Ma, obi dị aghụghọ. O nwere ike anyị agaghị ama na anyị achụwala “ihe ndị dị n’ụwa.” (Jere. 17:9) N’ihi ya, anyị kwesịrị ime ihe Pọl kwuru. Ọ sịrị: “Na-anwalenụ ma ùnu nọ n’okwukwe ahụ, na-anwapụtanụ ihe unu onwe unu bụ.” Ka anyị na-amụ Baịbụl, anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị, sị: ‘Ihe ndị m na-eche na ihe ndị m chọrọ ime hà na-eme Chineke obi ụtọ’?—2 Kọr. 13:5.
18, 19. Gịnị mere anyị kwesịrị iji kpebisie ike na anyị ga-abụ ụdị ndị Jehova chọrọ ka anyị bụrụ?
18 Ihe ọzọ ga-eme ka anyị ghara ịna-achụ “ihe ndị dị n’ụwa” bụ icheta ihe Jọn kwuru. Ọ sịrị: “Ụwa na-agabiga, ọchịchọ ya na-agabigakwa, ma onye na-eme uche Chineke ga-anọgide ruo mgbe ebighị ebi.” (1 Jọn 2:17) Ụwa Setan yiri ihe ga-adịru mgbe ebighị ebi. Ma, a ga-ebibi ya otu ụbọchị. Ọ bụrụ na anyị eburu n’obi na a ga-ebibi ihe niile dị n’ụwa a n’oge na-adịghị anya, ọ ga-eme ka anyị ghara ikwe ka Ekwensu duhie anyị.
19 Pita onyeozi kwuru na onye ọ bụla n’ime anyị kwesịrị ịbụ ụdị onye Chineke chọrọ ka ọ bụrụ ka anyị “na-echere ma na-eburu ọbịbịa nke ụbọchị Jehova n’uche.” Ụbọchị ahụ ‘ga-eme ka eluigwe ree ọkụ wee gbazee, ihe ndị dị n’eluigwe na ụwa adịkwa oké ọkụ wee gbazee!’ (2 Pita 3:12) N’oge na-adịghị anya, ụbọchị ahụ ga-abịa, Jehova ga-ebibikwa ihe niile gbasara ụwa Setan. Tupu ụbọchị ahụ abịa, Setan ka ga na-eji “ihe ndị dị n’ụwa” anwa anyị ọnwụnwa otú ahụ o si nwaa ma Iv ma Jizọs. Anyị ekwesịghị ime ka Iv, ya bụ, chọwa ime ihe ọjọọ na-agụ anyị agụụ. Anyị mee otú ahụ, ọ ga-adịzi ka ọ̀ bụ Setan bụ chi anyị. Anyị kwesịrị ime ka Jizọs, ma gbaara ọnwụnwa Setan ọsọ, ọ bụrụgodị na ihe ọ chọrọ iji arata anyị yiri ihe magburu onwe ya. Ka anyị niile kpebisie ike na anyị ga-abụ ụdị ndị Jehova chọrọ ka anyị bụrụ.
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Ọgọst 2013